Fihibohana tanteraka :: Ho mafy kokoa ny fepetra horaisina amin’ny faran’ny herinandro • AoRaha
Fihibohana tanteraka Ho mafy kokoa ny fepetra horaisina amin’ny faran’ny herinandro
Manamafy hatrany ny lehibe mpitarika ny Emmonat, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa “ho mafy hatrany ny fepetra horaisina hampanajana ny fihibohana tanteraka mandritra ny faran’ny herinandro”. Manaiky ny lesoka mety ho nisy nataon’ny mpitandro filaminana nanatanteraka ny asa itsy tompon’andraikitra ambony itsy, saingy miantso izay mahatsikaritra ireny mba hametraka fitarainana any amin’ny lehiben’ny mpitandro filaminana handraisana fepetra tandrify izany.
Manodidina ny efajato ireo olona voasambotra tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy nanaja ny fepetra mihiboka tanteraka ireo olona ireo. Naiditra amponjakely izy ireo nandritra ny alina roa. Ankoatra izay, nisy ireo olon-kafa voasambotra nasaina nanadio tatatra sy sekoly, lalam-bahoaka sy ny maro hafa. Navotsotra ireo avy naiditra am-ponjakely ny alatsinainy saingy noraisina an-tsoratra ny momba azy ireo tsirairay.
“Fepetra noraisina tsy mitovy ny tamin’ny taon-dasa ireo natao ireo. Raha mbola misy ny minia mandika hatrany ny fepetra hiadiana amin’ity areti-mandoza mahafaty olona maro ity dia hamafisinay ihany koa ny fepetra avy aminay”, hoy hatrany ny mpitarika ny EmmoNat. “Raha mbola mamerina iretsy olona efa voasambotra tamin’ny faran’ny herinandro iretsy dia hatolotra ny Fitsarana ka mety hiafara amin’ny fampidirana am-ponja”, hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny mpitandro filaminana.
Momba ny hadisoana ataon’ny mpitandro filaminana dia nilaza ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa “toy ny zanaka ao an-trano izy ireny. Tsy mitovy avokoa ny fihetsiny na fitaizana mitovy ihany aza. Ny saonjo iray lohasaha ihany koa tsy ilaozan’izay ho mamarara.” “Tsy midika fa mamarara avokoa anefa ny saonjo rehetra raha misy iray maningana. Ny olona asaina mihiboka any antranony fa ny mpitandro filaminana asaina mivoaka ny trano mba hiarovana antsika rehetra. Ny fahatongavantsain’ny tsirairay no hampandresy antsika amin’ny ady fa tsy hifanenjika sy hifanipaka eto isika rehetra”, hoy izy.